Ny zazalahy saro-kenatra te hihaona frantsay ao Parisy izay Mampiaraka ny - Video firesahana amin'ny firaisana ara-nofo. Velona ny fampielezam-peo sy ny Fiarahana.
Amin'ny maha-nahazo diplaoma avy amin'ny Oniversite Amerikanina iray izay vao nifindra tany Frantsa nandritra ny taona vitsivitsy aho, dia miezaka ny mamorona ny fiainana ara-tsosialy, ho akaiky araka izay azo atao ny fiainana ny teny frantsayFoana aho no nandre ny momba ny fahasamihafana ara-kolontsaina ary izaho saro-kenatra kely momba ny fanaovana frantsay zava-bita ho an'ny vehivavy, noho ny tahotra ny famakiana ny sasany amin'ireo zava-dehibe indrindra ara-kolontsaina fady. Afaka hanome ahy na inona na inona tari-dalana mba hanampy ahy handresy izay no lasa mampihomehy (mino aho) sakana? A: Ny fanontaniana dia mendrika ny tetikasa fikarohana, ary ny vokatra dia mety miovaova arakaraka ny sokajin-taona ny vahoaka dia nitafatafa. Izany angamba no dingana voalohany tokony hifandray amin'ny olona hafa ny taranaka izay efa eto mandritra ny fotoana fohy mba hahazoana ny mahatsapa fa ny zavatra hitany. Nanao izany mba voafetra ihany ny halehiben'ny ary mifototra amin'ny taona maro ny zavatra niainako, dia afaka manao soso-kevitra manaraka ireto. Ny fisondrotry ny fahatsapana ny antsoina hoe fanorisorenana olana isika dia mamaky mikasika ireo ao amin'ny United States, dia tsy mbola tonga ireo shores, frantsay sy ny vehivavy te-ho nahatsikaritra, ary nankasitraka ny ezak'izy ireo vehivavy azy.
Izany dia midika fa afaka mahatsapa soa aman-tsara rehefa manao sasany fanamarihana, hanipy ny sasany maso na miresaka momba ny lohahevitra sasany, izay azo antoka fa midika fa ianao, toy ny olona, dia mahafantatra ny firaisana ara-nofo mpiara-miasa sy hankafy azy io.
Na izany aza, izany dia tsy ahitana ny teny ratsy na tsy te-hilaza fa mety hamely anareo midina. Tao anatin'izany ihany, ny vehivavy te-ireo lehilahy mpiara-mitory mba hikarakara ny zavatra toy ny famandrihana ny trano fisakafoanana ho anao, nanome baiko ny divay, miantso ny fiarakaretsaka, ary amin'ny ankapobeny firafitry ny fotoana dia hozaraina. Ny fifandraisana lalina, ireo fanantenana miova, fa tamin'ny voalohany dia mihevitra ny nentim-paharazana andraikitra kokoa ny manan-kaja rehetra amin'ny United States. Raha toa ianao ka tsy mpianatra iray na ny mpanakanto iray, ianao angamba efa fantany fa velona aho eto kokoa conservatively noho ny ao an-trano. Raha manao plaid pataloha mainty sy mena palitao ny hariva, aza gaga raha toa ka ny mpiara-miasa mivadika midina manaraka ny fanasana. Ny fianakaviana no zava-dehibe kokoa amintsika izany dia masina sy voaaro, ary ny ray aman-dreny tsy te-ireo zanany lahy sy vavy mba hitondra an-trano ny olona izy ireo, raha tsy ny fifandraisana no lehibe. Aza gaga raha vehivavy hihaona, ary tsy hampiditra ny ray aman-dreniny nandritra ny fotoana kelikely. Fianakaviana mafy orina koa dia midika fa ny fitarihana ny ray aman-dreny no manan-danja sy amim-panajana. Ny alahady ho an'ny sakafo, ohatra, dia mety ho fomba amam-panao ao amin'ny vaovao sipa ny fianakaviana izay manana na inona na inona intsony, na dia ny fanasana mba handany ny andro any Deauville tora-pasika. Raha tena manolo-tena ho antony iray, ho vonona hiatrika izany miaraka amin'ny matanjaka ny firaiketam-po sy ny fianakaviana. Misy izao tontolo izao ny an-kolaka, fantaro ny zavatra andrasana izay mandrafitra ny tena minefield amin'ny hazo fijaliana ara-kolontsaina ny fifandraisana sy mandeha lavitra mihoatra izany ny valiny. Amin'ny Ankapobeny, na izany aza, sahiko ny milaza fa ny tolotra ao Frantsa dia be kokoa noho ny ao an-trano.
Raha toa ny vehivavy iray manasa anao an-tranony ho an'ny kafe ao ny hariva, ianao afaka ny ho azo antoka fa izy dia midika bebe kokoa ianao, ary ianao dia ho fadiranovana ny tenanao raha toa ianao fotsiny ny zava-pisotro sy ny handositra.
Misokatra ny fahatelo sofina ny fanehoan-kevitra fa toa tahaka ny fanary zavatra sy ny maka fotoana mba avoaka. Ny zavatra niainako dia mampiseho fa ny hevi-diso isan-karazany momba ny fahadisoan-dàlana, frantsay vehivavy, ary koa vehivavy Amerikana izay daty, ary izany dia tokony hanome anareo ny loha manomboka eo amin'ny ezaka mba ahitana azy ireo eo amin'ny fiainanao. Jill Bourdais dia psychotherapist izay fomba fanao any Paris na manokana ary tany amin'ny hopitaly. Ny manam-pahaizana manokana amin'ny mpivady sy ny fianakaviana ny olana, izy dia mampianatra koa ny MPIVADY, ny fahaiza-manao ny fananganana mazava ho azy fa amin'ny fifandraisana akaiky.
Ahoana no hahitana Ha Omegla
Ortodoksa Mampiaraka vehivavy te-hihaona chat lahatsary an-tserasera ho maimaim-poana tsy misy fisoratana anarana ny vehivavy te hihaona aminao video Niaraka tamin'ny zazavavy an-tserasera malalaka tsy misy lahatsary amin'ny chat sary mampiaraka maimaim-poana ny lahatsary amin'ny chat Mampiaraka tranonkala ny lahatsary Mampiaraka video Mampiaraka ny vehivavy online